प्रियंका भन्छिन्- ‘वर्षाले माफि मागिसकिन्, नेपाली चेली हुन् हामीले माफ नदिए कसले दिन्छ’ – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > प्रियंका भन्छिन्- ‘वर्षाले माफि मागिसकिन्, नेपाली चेली हुन् हामीले माफ नदिए कसले दिन्छ’
admin May 25, 2020 जीवनशैली, समाचार, समाज 0
उनले मा’फि पनि मागिसकिन् । हामीले हाम्री चेलीलाई मा’फ नगरे कसले गर्छ ? हाम्रो चेलीको इज्जतको रक्षा गर्ने कर्तव्य हाम्रो पनि होइन र पोखरा- पछिल्लो समय नायिका वर्षा राउत आफ्नो बोलीका कारण आ’लोचनामा परेकी छिन् । वर्षाले बोल्ने क्रममा नेपाल र भारतको मिडियाका कारण आफूलाई भारतीय साथीहरुसँग कुरा गर्न गा’ह्रो भएको बताएपछि उनि बिवा’दमा ता’निएकी हुन् ।
यसैक्रममा नायिका प्रियंका कार्कीले नायिका वर्षा राउतले बोल्ने क्रममा ग-ल्ती गरेको भन्दै माफि दिन आग्रह गरेकी छिन् । उनले सामाजिक संजालमा आफ्नो भनाई सार्वजनिक गर्दै माफिको लागि अाग्रह गरेकी हुन् ।
प्रियंका लेख्छिन्–‘वर्षालाई बर्सिरहेको गा’ली, ग-लौच, अ’पशब्द सबै देखेर दुःख लागेको छ । वर्षाको अन्र्तवार्तामा म पनि सँगै थिए । हो, म मान्छु, उनको बोलीको शैली, प्रस्तुतिकरण, शब्दहरुको छनोटले सारा नेपालीहरुको चित्त दुखेको छ । सारा नेपालीले उनलाई हर कदम नियालिरहेका छन् । देशको बिषयमा बोल्दा त झनै धेरै विचार पुर्याएर बोल्नुपर्छ । उनले आफ्नो मा-फि पत्रमा दर्शाए जस्तै बोल्दापनि परिपक्कता देखाएको भए यो परिस्थिती आउदैन थियो, सायद ।’
नायिका कार्कीले ग-ल्ती सबैबाट हुने भन्दै वर्षाले देशको माया नै नभएर यस्तो नबोलेको पनि बताएकी छन् । उनले, यो समयमा वर्षालाई सुझाव दिन, थाहा नभएको कुरा सिकाइदिन पनि अपिल गरेकी छिन् ।
उनले अन्त्यमा लेख्छिन्- ‘उनले मा’फि पनि मागिसकिन् । हामीले हाम्री चेलीलाई मा’फ नगरे कसले गर्छ ? हाम्रो चेलीको इज्जतको रक्षा गर्ने कर्तव्य हाम्रो पनि होइन र ?’
बम बिस्फोट घटनाका प्रत्यक्षदर्शी एनसेलका सुरक्षागार्डले दिए यस्तो अनौठो बयान, प्रहरीनै तिनछक्क